Xinhua Myanmar - အမေရိကန်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Alex Azar ရာထူးမှနုတ်ထွက်၊ Capitol အကြမ်းဖက်မှုကိုရှုတ်ချကြောင်း နုတ်ထွက်စာတွင် ဖော်ပြ
အမေရိကန် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ,ရာထူးမှုနုတ်ထွက်
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ရှိ အိမ်ဖြူတော်တွင် COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တက်ရောက်နေသည့် ကျန်းမာရေးနှင့် လူသားဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု ဝန်ကြီး Alex Azar ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) North America
ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် နေ့စွဲဖြင့်ရေးသားထားသော နုတ်ထွက်စာ၌ Azar က ၎င်းအနေဖြင့် ရွေးကောက်ခံသမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုမည့် ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက် မွန်းတည့်ချိန်တွင် ရာထူးမှနုတ်ထွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်အား ပြောကြားထားသည်။
“အထူးသဖြင့် ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်း လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ပြောစကားတွေက ရာထူးကနေ ထွက်ခွာတော့မယ့် အစိုးရရဲ့ အစဉ်အလာကို မှေးမှိန်စေတယ်။ Capitol တိုက်ခိုက်မှုတွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ အာဏာလွှဲပြောင်းရေး အစဉ်အလာတွေကို ထိပါးစော်ကားလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်” ဟု Azar က ပြောခဲ့သည်။
“ကျွန်တော် ခင်ဗျားကို အနူးအညွတ်ပန်ကြားချင်ပါတယ်။ ဘယ်လို အကြမ်းဖက်မှုမျိုးကိုမဆို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆက်လက်ရှုတ်ချဖို့နဲ့ ဝါရှင်တန် ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နေရာမှာဖြစ်စေ ဘိုင်ဒန်ရဲ့ ရာထူးအပ်နှင်းပွဲ ကျင်းပမှုတွေကို မနှောင့်ယှက်ရေး တောင်းဆိုဖို့ ဆက်လက်ပြောကြားလိုပါတယ်” ဟု Azar က နုတ်ထွက်စာထဲ၌ ရေးသားထားသည်။
Azar ၏ နုတ်ထွက်မှုသည် သမ္မတ ထရမ့်ကို ထောက်ခံသူများက Capitol အဆောက်အအုံကို ချိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခဲ့ကြသော ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Elaine Chao ၊ ပညာရေးဝန်ကြီး Betsy DeVos နှင့် အမိမြေလုံခြုံရေး ယာယီဝန်ကြီး Chad Wolf တို့ပြီးနောက် နောက်ဆုံးနုတ်ထွက်သည့် ထရမ့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ (Xinhua)
U.S. Health Secretary Azar resigns -- reports
2nd LD: U.S. HHS Secretary Azar condemns Capitol violence in resignation letter
WASHINGTON, Jan. 15 (Xinhua) -- U.S. Health and Human Services Secretary Alex Azar said he will resign on Jan. 20 and condemned the violence in the storming of U.S. Capitol, according to his formal resignation letter leaked Friday.
Azar said in his letter to President Donald Trump, dated Jan. 12, that he will resign at noon on Jan. 20, when U.S. President-elect Joe Biden is sworn in.
"The actions and rhetoric following the election, especially during the past week, threaten to tarnish" the legacies of the out-going administration, Azar said, adding "the attacks on the Capitol were an assault on our democracy and on the tradition of peaceful transitions of power."
"I implore you," Azar told Trump in the letter, "to continue to condemn unequivocally any form of violence, to demand that no one attempt to disrupt the (Biden's) inaugural activities in Washington or elsewhere."
The latest Trump Cabinet member to quit in the aftermath of Capitol breach by the president's supporters, Azar's move followed those of Transportation Secretary Elaine Chao, Education Secretary Betsy DeVos, and Acting Secretary of Homeland Security Chad Wolf. Enditem
Previous Article ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ဝန်က မြို့တော်၏လူနေရပ်ကွက်တွင် အလားအလာရှိသော တိုက်ခိုက်မှုအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်နေ
Next Article အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားသည့် ဝါရှင်တန်မြို့၏ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက် မြင်ကွင်းများ